Momma Yensusuw Yɛn Ho na Yɛnhyehyɛ Yɛn Ho Nkuran | Adesua
“Momma yensusuw yɛn ho yɛn ho ho, nkanyan yɛn ho yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu.”—HEB. 10:24.
Bible ka sɛ “yensusuw yɛn ho” a, ɛkyerɛ sɛn?
Yɛbɛyɛ dɛn ‘akanyan yɛn ho yɛn ho akɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu’?
Ɔkwan bɛn na yebetumi afa so ahyɛ afoforo nkuran?
1, 2. Dɛn na ɛhyɛɛ Yehowa Adansefo 230 no mpamden ma wotumi tuu owuo aperenten no wɔ Wiase Ko II no awiei?
BERE a Wiase Ko II reba awiei no, Hitler asraafo hui sɛ ke ara ne ke wobedi nkogu. Enti wɔhyɛɛ mmara sɛ wonkum nneduafo mpempem a wɔaka wɔ afiase nyinaa. Wɔyɛe sɛ wɔde nneduafo a wɔwɔ Sachsenhausen nneduaban mu bɛkɔ hyɛn gyinabea bi. Na wɔn adwene ara ne sɛ wɔde wɔn begu hyɛn mu akohwie wɔn agu po mu. Eyi begyee din sɛ ‘owuo aperententu.’
2 Na wɔbɛma nneduafo 33,000 a wɔwɔ Sachsenhausen nneduaban mu no anantew atwa kilomita 250 (kwansin 155) akɔ hyɛn gyinabea bi wɔ Lübeck, Germany. Na Yehowa Adansefo 230 a wofi aman asia so ka nneduafo no ho. Asraafo no hyɛɛ Adansefo no sɛ wɔnnantew mmom. Ná yare ne kɔm ama nneduafo no nyinaa ayɛ hatahata, nanso anuanom nyinaa tumi koduu hɔ a obiara ho anka. Ɛyɛɛ dɛn na ɛbaa saa? Onua biako kae sɛ: “Yɛrekɔ nyinaa na obiara rehyɛ ne nua nkuran sɛ ‘mia w’ani.’” Onyankopɔn maa wɔn “tumi a ɛboro onipa de so,” nanso wɔn nuanom nkuranhyɛ ne wɔn dɔ ka ho bi na wotumi faa ɔhaw ne abɛbrɛsɛ yi nyinaa mu.—2 Kor. 4:7.
3. Adɛn nti na ehia sɛ yɛhyehyɛ yɛn ho nkuran?
3 Ɛnnɛ, ɛnyɛ owuo aperenten na yɛretu, nanso ɔhaw ne amanehunu ne yɛn redi. Bere a wɔde Onyankopɔn Ahenni sii hɔ 1914 no, wɔtow Satan fii soro baa asase so. Bible ka sɛ “ne bo afuw denneennen, efisɛ onim sɛ ne bere a aka yɛ tiaa.” (Adi. 12:7-9, 12) Bere a Harmagedon repempɛn so yi, Satan awe ataa so sɛ obesum sɔhwɛ ne amanehunu agu yɛn akwan mu na ama yɛn som agyigya. Eyi da nkyɛn a, asetenam dadwen ne ateetee nso ne yɛn redi asi. (Hiob 14:1; Ɔsɛnk. 2:23) Ɛtɔ bere bi a ɔhaw ne abɛbrɛsɛ tumi dokoro yɛn araa ma yɛn mu ahoɔden nyinaa tu. Ɛba saa a, abasamtu nti yentumi nyɛ yɛn ho hwee. Eyi nyinaa tumi ka yɛn som. Wo de, yɛnhwɛ onua bi a waboa nnipa pii ma wɔagyina wɔn nan so wɔ Yehowa som mu. Onua yi yɛɛ saa mfe pii, nanso bere a ɔbɔɔ akora na yare reteetee ɔne ne yere no, n’abam bui paa. Onua yi asɛm yi bi betumi ato yɛn mu biara; ɛba saa a, ehia sɛ yenya “tumi a ɛboro onipa de so” fi Yehowa hɔ. Nanso ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi sɛ saa bere no na yehia yɛn nuanom nkuranhyɛ paa.
4. Sɛ yebetumi ahyɛ afoforo nkuran a, ɔsomafo Paulo afotu bɛn na ɛsɛ sɛ yetie?
4 Sɛ yebetumi ahyɛ afoforo nkuran a, ɛsɛ sɛ yetie afotu a ɔsomafo Paulo de maa Hebrifo Kristofo no. Ɔkae sɛ: “Momma yensusuw yɛn ho yɛn ho ho, nkanyan yɛn ho yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu, na mommma yɛnnkwati sɛ yɛne yɛn ho behyiam sɛnea ayɛ ebinom su no, na mmom yɛnhyehyɛ yɛn ho nkuran, titiriw bere a muhu sɛ ɛda no rebɛn no.” (Heb. 10:24, 25) Eyi yɛ afotu a ehia paa. Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn de ayɛ adwuma?
“MOMMA YENSUSUW YƐN HO YƐN HO”
5. Sɛ Bible ka sɛ “yensusuw yɛn ho yɛn ho” a, ɛkyerɛ sɛn? Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
5 Sɛ Bible ka sɛ “yensusuw yɛn ho yɛn ho” a, nea ɛkyerɛ ne sɛ “yebedwen afoforo ho na wɔn asɛm ayɛ yɛn asɛm.” Sɛ yehyia anuanom wɔ Ahenni Asa so na nea yɛka ara ne sɛ ‘ɛte sɛn,’ ‘ɛte sɛn,’ anaa yɛbɔ nkɔmmɔ hunu biara kɛkɛ a, wohwɛ a yebetumi aka paa sɛ yedwen wɔn ho na wɔn asɛm yɛ yɛn asɛm? Ɛnyɛ ade a yebetumi aka saa. Ɛwom, yɛmpɛ sɛ yɛde yɛn ho “gyigye nkurɔfo nsɛm mu” na mmom ‘yedi yɛn ankasa fie asɛm.’ (1 Tes. 4:11; 1 Tim. 5:13) Nanso sɛ yebetumi ahyɛ yɛn nuanom nkuran a, ɛsɛ sɛ yehu wɔn yiye. Ehia sɛ yehu nea wɔrefa mu wɔ abrabɔ mu, wɔn suban a ɛyɛ fɛ, wɔn ahokeka wɔ asafo no mu, ne wɔn mmerɛwyɛ. Ɛsɛ sɛ yɛma wohu sɛ yɛpɛ wɔn asɛm na yɛdɔ wɔn. Sɛ yebetumi ayɛ eyi nyinaa a, ɛnsɛ sɛ yɛtwɛn ma ɔhaw bi to wɔn anaa wɔbotow ansa na yɛaka akɔ wɔn ho. Mmom ehia sɛ yɛka kɔ wɔn ho bere biara.—Rom. 12:13.
6. Dɛn na ɛbɛboa ɔpanyin bi ma ‘wasusuw’ asafo no mufo ho?
6 Bible tu asafo mu mpanyimfo fo sɛ ‘wɔnyɛn Onyankopɔn nguankuw a wɔhyɛ wɔn nsa no’ anigye so. (1 Pet. 5:1-3) Sɛ mpanyimfo nnim nguan a wɔhyɛ wɔn nsa no yiye a, ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi ayɛ adwuma yi ma asɔ ani? (Monkenkan Mmebusɛm 27:23.) Sɛ mpanyimfo kyerɛ wɔn nuanom ho anigye na wonya bere ma wɔn a, ɛnde sɛ anuanom hia mmoa bi a, wɔrentwentwɛn wɔn nan ase sɛ wɔbɛba mpanyimfo no hɔ. Bio, ɛbɛyɛ mmerɛw ama anuanom sɛ wɔne mpanyimfo no bedi atirimsɛm. Ɛba saa a, mpanyimfo no behu onua biara ahiasɛm na wɔaboa no.
7. Sɛ obi haw na ɔkasa “hatuhatu” a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
7 Paulo ka kyerɛɛ Tesalonika asafo no sɛ: “Mommoa wɔn a wɔyɛ mmerɛw.” (Monkenkan 1 Tesalonikafo 5:14.) Wɔn a ‘wɔayɛ mmerɛw’ no bi ne “akra a wɔahaw” anaa wɔn abam abu. Mmebusɛm 24:10 ka sɛ: “W’aba mu abu ahohia da mu anaa? W’ahoɔden so bɛtew.” Sɛ obi abam bu a, ebia ɔbɛkasa “hatuhatu” anaa obetu nsɛm bumbum. (Hiob 6:2, 3) Sɛ yɛreboa nnipa a wɔte saa a, ɛnsɛ sɛ yɛma nsɛm a wɔka haw yɛn; ebia wɔkaa no kɛkɛ na ɛnyɛ wɔn suban ne no. Ababaa bi a yɛfrɛ no Rachelle ahu nea yɛreka yi bi pɛn. Bere bi ne maame nyaa adwenemhaw. Rachelle kae sɛ: “Ɛtɔ da bi a, me maame tumi ka asɛm bi ma ɛyɛ me sɛ memfa me ti nkɔbɔ dua mu. Ɛba saa a, metena hɔ dinn ka kyerɛ me ho sɛ, ‘Minnim Maame saa. Nea minim ne sɛ Maame pɛ nnipa na ne yam ye.’ Mabehu sɛ, sɛ obi haw a, otumi keka nsɛm bi a ɔnhyɛ da. Sɛ woanhwɛ yiye na woyɛ bi tua ne ka a, na woaka n’akyi koraa.” Mmebusɛm 19:11 ka sɛ: “Onipa nhumu twentwɛn n’abufuw ase, na ɛyɛ anuonyam ma no sɛ obebu n’ani agu bɔne so.”
8. Henanom titiriw na ehia sɛ ‘yɛkyerɛ’ sɛ yɛdɔ wɔn, na dɛn ntia?
8 Sɛ obi yɛ bɔne na ɔyɛ nea obetumi biara de siesie n’akwan mpo a, aniwu anaa asɛm no ho yaw nti obetumi abotow. Ɛba saa a, dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ ‘yesusuw ne ho’? Bere bi Korinto asafo no muni bi yɛɛ bɔne, nanso akyiri yi onuu ne ho. Enti Paulo kyerɛw Korintofo no sɛ: “Munyi mo yam mfa mfiri na monkyekye ne werɛ, na awerɛhodi bebrebe ammene no. Ne saa nti mitu mo fo sɛ monkyerɛ sɛ modɔ no ampa.” (2 Kor. 2:7, 8) Nsɛm asekyerɛ nhoma bi kyerɛ asɛm “monkyerɛ” no ase sɛ “monna no adi” anaa “momma onhu.” Sɛ yɛdɔ onua bi anaa yedwen ne ho a, ɔrenhu gye sɛ yɛde yɛn nneyɛe ne yɛn suban nyinaa kyerɛ.
‘YENKANYAN YƐN HO NKƆ ƆDƆ NE NNWUMA PA MU’
9. Sɛ Bible ka sɛ ‘yɛnkanyan yɛn ho yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu’ a, ɛkyerɛ sɛn?
9 Paulo kae sɛ: “Momma yensusuw yɛn ho yɛn ho ho, nkanyan yɛn ho yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu.” Nea eyi kyerɛ ne sɛ yɛbɛyɛ biribi de apusuw anuanom ma ɔdɔ atena yɛn mu na yɛayɛ nnwuma pa. Fa no sɛ woasɔ gya na ɛreyɛ adum. Dɛn na wobɛyɛ? Nea wobɛyɛ ara ne sɛ wobɛka ahyem na woafita mu. (2 Tim. 1:6) Saa ara na yɛn nso yebetumi ayɛ biribi de akanyan yɛn nuanom ma wɔakɔ so de nsi ne ahokeka asom Nyankopɔn na wɔaboa wɔn yɔnko nnipa. Ɔkwan biako a yebetumi afa so akanyan anuanom akɔ nnwuma pa mu ne sɛ yɛbɛkamfo wɔn.
Wo ne wo nuanom mmom nyɛ asɛnka adwuma no
10, 11. (a) Hena na ɛsɛ sɛ yɛkamfo no? (b) Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛnea nkamfo betumi aboa obi a wadi mfomso?
10 Obiara biara hia nkamfo; yɛn abam abu oo, yɛn abam mmui oo, yehia nkamfo. Asafo mu panyin bi kae sɛ: “Menkae da koro mpo a me papa kamfoo me. Enti minyinii no, na mennye nni sɛ metumi ayɛ adepa biara da. . . . Seesei mewɔ mfe 50, nanso sɛ me nnamfo kamfo me sɛ mereyɛ m’adwuma yiye wɔ asafo no mu a, na me ti ada. . . . Nea m’ankasa mafa mu no ama mahu sɛ ehia paa sɛ mekamfo afoforo. Enti sɛ mihu ade ketewaa bi a ɛsɛ sɛ mekamfo obi a, meyɛ saa ntɛm.” Nkamfo ma obiara ani gye. Akwampaefo oo, nkwakoraa oo, mmerewa oo, wɔn a wɔabotow oo, obi biara pɛ nkamfo.—Rom. 12:10.
11 Sɛ obi di mfomso na mpanyimfo pɛ sɛ ‘wogye no si yiye’ a, wotu no fo. Nanso ɛsɛ sɛ mpanyimfo no kae sɛ ade biako a ebetumi akanyan onipa no ma wasesa n’akwan na wayɛ nea ɛteɛ ne nkamfo. (Gal. 6:1) Eyi na ɛboaa onuawa bi a ɔde Miriam. Ɔkae sɛ: “Bere bi, me nnamfo a me ne wɔn kɔ nna-kra-nna gyaee asafo no. Saa bere no ara nso na me papa nyaa adwenem yare huhuuhu bi. Asɛm no bubuu me ma m’adwene nyinaa tu frae. Na minhu nea menyɛ, enti mekɔfaa aberante bi a onni asafo no mu adamfo, na na me ne no puepue.” Na onuawa yi susuw sɛ eyi bɛtew ne haw no so nanso ɛsɛee asɛm no koraa. Onyaa adwene sɛ ɔmfata sɛ Yehowa bɛdɔ no, enti ɔyɛe sɛ obefi nokware no mu. Ɔpanyin bi ne onuawa no bɔɔ nkɔmmɔ kaa ne koma too ne yam. Ɔmaa onuawa no hui sɛ wayɛ pii wɔ Yehowa som mu enti Yehowa da so dɔ no. Afei, ɔhyɛɛ ɔne Yehowa adamfofa mu gya bio. Ɔne aberante no twaa ayɔnkofa mu, na ɔsan yeree ne ho som Yehowa.
Kanyan afoforo kɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu
12. Sɛ yɛde yɛn nuanom toto afoforo ho anaa yɛhyɛ wɔn aniwu a, dɛn na ebetumi afi mu aba?
12 Sɛ yɛpɛ sɛ ‘yɛkanyan’ yɛn nuanom ma wɔde ahokeka som Onyankopɔn a, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛamfa wɔn antoto afoforo ho anaa yɛanka biribi anhyɛ wɔn aniwu anaa yɛanhyehyɛ mmara amma wɔn. Yɛyɛ saa a, ebia ebepusuw wɔn ma wɔakeka wɔn ho, nanso ɛrenni gyina wɔbɛte ada. Mmom sɛ yɛpɛ sɛ yɛkanyan yɛn yɔnko Kristoni ma ɔyɛ pii a, nea ehia paa ne sɛ yɛbɛkamfo no na yɛaboa no ma wahu sɛ ɔdɔ Onyankopɔn enti na ɔresom no. Eyi bɛma wayi ne komam nyinaa asom Onyankopɔn.—Monkenkan Filipifo 2:1-4.
“YƐNHYEHYƐ YƐN HO NKURAN”
13. Sɛ wɔka sɛ yɛnhyɛ afoforo nkuran a, ɛkyerɛ sɛn? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
13 Ehia sɛ ‘yɛhyehyɛ yɛn ho nkuran, titiriw bere a yehu sɛ ɛda no rebɛn no.’ Sɛ wɔka sɛ yɛnhyɛ afoforo nkuran a, ɛkyerɛ sɛ yɛbɛka biribi de ahyɛ wɔn mpamden ma wɔakɔ so de nsi ne ahokeka asom Onyankopɔn. Yɛadi kan ahu sɛ, sɛ yɛkanyan afoforo kɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu a, ɛte sɛ gya bi a ɛreyɛ adum a yɛreka ahyem. Ɛnde, afoforo a yɛbɛhyɛ wɔn nkuran nso ɛ? Ɛte sɛ nea obi rehwie krasin agu gya mu ma adɛw buruburuburu. Ɔkwan foforo a yɛbɛfa so ahyɛ yɛn nuanom nkuran ne sɛ yɛbɛkyekye wɔn werɛ na yɛahyɛ wɔn den bere a wɔabotow. Sɛ yɛreboa anuanom a wɔte saa a, ɛsɛ sɛ yɛto yɛn bo ase ne wɔn kasa na yɛyɛ wɔn brɛbrɛ. (Mmeb. 12:18) Bio nso, momma yɛn mu biara “nyɛ ntɛm ntie asɛm,” na “ɔnyɛ nyaa nkasa.” (Yak. 1:19) Sɛ yɛn nuanom rekasa na yɛyɛ aso tie wɔn a, yebehu nea ɛhaw wɔn na yɛahu nea yɛbɛyɛ aboa wɔn.
Wo ne wo nuanom mmɔ
14. Ɔkwan bɛn na ɔpanyin bi faa so boaa onua bi a n’abam abu?
14 Yɛnhwɛ sɛnea ɔpanyin bi boaa onua bi a na wagyae adesua ne asɛnkakɔ mfe pii. Ɔpanyin no daa no adi sɛ odwen ne nua no ho. Ɔtoo ne bo ase tiee onua no yiye, na ohui sɛ ɔdɔ Yehowa paa. Ná onua no mma Ɔwɛn-Aban biara mpa ne ti so a ɔnkenkan. Mpo na ɔpɛ sɛ ɔsan fi ase kɔ adesua. Nanso anuanom bi nneyɛe buu n’abam na odii yaw. Ɔpanyin no yɛɛ aso tiee onua no, na wanka biribiara ankyerɛ sɛ ɔrebu no atɛn. Mmom ɔmaa onua no hui sɛ ɔdɔ ɔne n’abusua, na odwen wɔn ho. Akyiri yi onua no ankasa hui sɛ wama nsɛm bi a atwam rehaw no dodo. Ohui sɛ eyi na ayɛ osiakwan a enti ontumi nsom ne Nyankopɔn a ɔdɔ no no. Ɔpanyin no ne onua no yɛɛ nhyehyɛe kɔɔ asɛnka. Ɔboaa onua no nkakrankakra ma ɔsan fii asɛnka ase, na edidi mu ara na ɔbɛyɛɛ asafo mu panyin bio.
Yɛ aso tie wo nua, na hyɛ no nkuran (Hwɛ nkyekyɛm 14, 15)
15. Sɛ obi abam bu na yɛreboa no a, yɛbɛyɛ dɛn asuasua Yehowa?
15 Sɛ obi abam bu na yɛreboa no a, ɛnsɛ sɛ yɛhwɛ kwan sɛ anim-anim yi ara ne ho bɛbae no anaa ɔde ne ti begye nea yɛreka no. Ebia ebehia sɛ yɛkɔ so ara boa no. Paulo kae sɛ: “Monkɔ so ara nsɔ wɔn a wɔayɛ mmerɛw mu, munnya obiara ho abotare.” (1 Tes. 5:14, An American Translation) Sɛ yɛreboa obi a wayɛ mmerɛw a, ɛnsɛ sɛ yɛpa abaw ntɛm, na mmom ‘yɛnkɔ so ara nsɔ ne mu,’ kyerɛ sɛ yɛnkɔ so mmoa no. Yehowa asomfo bi abam bui tete mmere mu, nanso onyaa wɔn ho abotare. Wo de, ma yɛmfa Elia nyɛ nhwɛso. Bere a Elia abam bui no, Onyankopɔn nyaa ne ho koma na ɔtee n’ase. Biribiara a Elia hia de ayɛ n’adwuma no, Yehowa de maa no. (1 Ahe. 19:1-18) Yehowa nyaa Dawid nso ho abotare. Bere a ɔyɛɛ bɔne no, onuu ne ho, enti Yehowa de kyɛɛ no. (Dw. 51:7, 17) Nea ɔkyerɛw Dwom 73 no nso kɔɔ tebea bi mu, na ɛkaa dɛ anka ogyaee Onyankopɔn som. Nanso Onyankopɔn ampa abaw; ɔkɔɔ so ara boaa no. (Dw. 73:13, 16, 17) Yehowa dwen yɛn ho, na ɔwɔ yɛn ho abotare, ɛnkanka bere a yɛabotow anaa yɛn abam abu. (Ex. 34:6) Yehowa mmɔborɔhunu yɛ “foforo anɔpa biara,” na ɛto “rentwa da.” (Kwa. 3:22, 23) Yehowa atwa ɛsa ato hɔ ama yɛn, na ɔpɛ sɛ yedi akyi na yɛyɛ wɔn a wɔn abam abu no brɛbrɛ.
YƐNHYEHYƐ YƐN HO NKURAN NA YƐNKƆ SO NNANTEW NKWA KWAN NO SO
16, 17. Bere a wiase yi rekeka kɔ n’awiei no, dɛn na ɛsɛ sɛ yesi yɛn bo sɛ yɛbɛyɛ? Adɛn ntia?
16 Nneduafo 33,000 a wofii Sachsenhausen nneduaban mu no, wɔn mu mpempem wuwui. Nanso Yehowa Adansefo 230 a wofii hɔ no biako mpo ho anka. Ade titiriw a ɛmaa wɔn nyinaa nyaa wɔn ti didii mu ne sɛ obiara boaa ne yɔnko hyɛɛ no nkuran.
17 Ɛnnɛ yɛnam ‘nkwa kwan’ no so. (Mat. 7:14) Aka to na borɔ na Yehowa asomfo nyinaa ahyɛn wiase foforo no mu, wiase a trenee te mu. (2 Pet. 3:13) Enti momma yɛn mu biara nsi nketekrakye sɛ ɔbɛboa ne yɔnko ma wanantew nkwa kwan no so.